Tujjaarri Chaayinaa Waang Ji'aaliin guyyaa tokkotti biliyoona $3.6 kasaare - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Tujjaarri Chaayinaa Waang Ji’aaliin guyyaa tokkotti biliyoona $3.6 kasaare
Tujjaarri Chaayinaa Waang Ji’aaliin guyyaa tokkotti biliyoona $3.6 kasaare
Tibbana xiyyi gabaa addunyaa kallattii kamitti akka ta’e worri oduu diinagdee hordoftan quba hindhabdan. Hundi gara kibbaatti kan akeekaa turan. Gabaan irraa gadee kokolaataa turte jechuun ni danda’ama. Qilleensi kasaaraa naannoo gabaa Chaayinaa irraa bubbise gabaa addunyaa hundarratti duumessa uffise. Hedduun gabaa addunyaa, keessumattuu kanniin biyyoota diinagdeen guddatanii, soda diinagdee Chaayinaa maaltu mudate jedhuun qabamanii hedduun isaanii kasaaraa guddaa keessumeessaa turan. Gabaa Ameerikaafi Awurooppaa hanga guyyaa kaleessaatti guyyatti kasaaraa hanga %4 tu isaan mudate. Gabaa gurguddoo akka DOW Jones, NASDAQ, FTSE, NIKKE, Shanghai SE fi kanniin biroos kasaaraa maallaqati yoo shallagamu doolaara Ameerikaa tiriiliyoona heddutti tilmaamamutu guyyaamuraasa keessatti isaan mudate. Faaydaan daldala yeroo dheeraa irraa argame yeroo torbaan tokko hinguunne keessatti haqame.
Kasaaraan kuni kan dhaabbilee qofa biratti dhaabbatu hinturre. mana namoota dhuunfaas qu’eera. Namoonni qabeenya isaanii gabaa adda addaa keessatti dhangalaasan qoonni kasaaraa guddaan isaan simateera. Namoota maallaqa heddu guyyoota muraasa keessatti dhaban keessaa abbaan qabeenyaa ardii Asiyaatti tokkoffaa ta’e, Waang Ji’aanliin (lammii Chaayinaati) , isa tokko. Akka gabaasa Bloomberg itt Waang Ji’aanliin guyyaa tokko qofatti kasaaraa doolaara Ameerikaa biliyoona 3.6 tu isa mudate. Qabeenya isaa irraa %10 guyyaa tokkotti haqame.
Waang Ji’aanliin kubbaaniyaa heddu qaba: Dalian Wandan isa guddicha. Irra jireessatti abbaan qabeenyaa kuni kan bobba’e ijaarsaafi misooma lafaa irratti.Kilabii Atileetikoo Maadriid keessaas, Waang Ji’aaliin, qooda dhibbeentaa 20 qaba.
Qabeenyaan Chaayinatti sadarkaa lammafaa irratti kan argamu Jaak Ma (Alibaba kan hundeesse) guyyaa tokkotti doolaara Ameerikaa miliyoona 540 kasaareera.
Kuni hundi kan ta’e Wixata darbe.Ammatti gabaan addunyaa tasgabbii argisiisaara. Tokko tokko ammoo daaraa kasaaraa naannoo torbaan tokkoof keessa gangalataa turanii dhadhahatanii gama faaydaa argamsiisutti deebi’aniiru.
Previous articleGanzabee Dibaabaa mt 1500’n shaampiyoonaa addunyaa taate
Next articleAtleet Maaree Dibaabaa fiigicha maaratoonii moo’atte